January 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း စာအုပ်များ
Author: lubo601 | 7:39 PM |2Comments |
ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း နှင့် Essay - Letter(၁) - ဦးအောင်ဟိန်းကျော်
ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း (၂) - ဦးအောင်ဟိန်းကျော်
“အာဆင်းနစ်များနေသောရေကို လူတစ်သန်းခန့် သုံးစွဲနေရ”
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၁ သန်း ခန့်သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်
သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် အများဆုံးပါဝင်မှု ပမာဏထက် ကျော်လွန်သော ရေများကို သုံးစွဲနေကြရ
သည်ဟု ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော အာဆင်းနစ် အန္တရာယ် လျော့ပါးရေးအစီ
8:16:00 am အောင်အောင်(မကစ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Computer , Network , Personal Information တွေကို နှောက်ယှက်ဖျက်စီးနေတဲ့ virus တွေက တနေ့ တနေ့ကို မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ Target တစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားကြသလို ၊ တချို့ကလဲ မိမိရဲ့ Skill ကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ အပြုသဘော မျိုး ရေးသားကြတယ် ။
အိမ်နီးချင်း မိသားစု တစ်ခုမှာ အခင်မင်ရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း လင်းထိန် အမည်ရ လူငယ် တစ်ဦး ရှိပါတယ်။ နေထိုင်တာက နယ်မြို့ လေး တစ်ခုဆိုတော့ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သိပ်မရှိပါဘူး။ လင်းထိန် က စာတော်ပါတယ်။ စာတော်ဆိုလို့ စာမှာ အမှတ်ပြည့်ရသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
by Myanmar Journal on Thursday, January 31, 2013 at 4:28pm ·
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ဆက်သွားနေ တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ အပေါ်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့ လာရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောလိုက် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားစေရုံလောက်ပဲ လုပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအဖြစ် မြင်တယ်လို့
Nay Zaw and UZa Wana shared DVB TV News's photo.
မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းဒေသ၊ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ် တလျှောက် နေထိုင်ကြသည့် ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသား လူငယ်အများစုသည် ကိုယ်ပိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများ ကန့်သတ်ခံနေ ရသည့်အတွက် မိမိကိုယ်မိမိ ရှမ်းနီ လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရှိသူ နည်းပါးလာနေသည်။
Author: lubo601 | 12:08 PM | 1 Comment |
View Download ဦးဇော်လင်း 17359k
View Download ဦးဇော်လင်း 12732k
Blossom Taw shared 2mz (နည်းပညာစုစည်းမှု) နှင့် လှုမှုကွန်ယက်'s photo.
ကွန်ပျူတာထဲတွင် လည်ပတ်နေသည့် Hard disk ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ်လှုပ်ခြင်း သည် ပြဿနာ မရှိနိုင်သော်လည်း အမြဲတစေ လှုပ်ခါနေခြင်းကို Hard disk က မကြိုက်ပါ။ မျက်နှာပြင် မညီသည့် နေရာတွင်တင်ပါက ကွန်ပျူတာသုံးနေစဉ် တစ်လျှောက်လုံး လှုပ်နေပါမည်။ Hard disk အသက်တိုနိုင်ပါသည်။
သွားတိုက်တာက သွားတွေကို သန့်ရှင်းအောင် တိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့ အစာတွေနဲ့ တံတွေး ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ဓာတ်ပြုပြီး ဘက်တီးရီးယားအကွက်လွှာ (Bacterial Plaque) တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီဘက်တီးရီးယား အကွက်လွှာ ထဲပါတဲ့ ပိုးတွေက သွားမျက်နှာပြင်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး အစားအစာနဲ့ ဓာတ်ပြုရာက ထွက်လာတဲ့ ဒြပ်ပေါင်း (End Products or Metabolic Products) တွေက သွားတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ သွားဖုံးတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ သွားတွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား အကွက်လွှာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ရင် ခံတွင်းသန့်ရှင်း သွားပြီး သွားပိုးစားရောဂါ၊ သွားဖုံးရောင်တာ၊ သွားမြစ်ဝှမ်းရောဂါနဲ့ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါတို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
လယ်သမားများ အကြွေးဆပ်နိုင်ရန် ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားသင့်ကြောင်း လယ်ဆည်ဝန်ကြီး အကြံပြု
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က အကြွေးကင်းအောင် နေထိုင်နည်းကို မျှဝေရင်း လယ် သမားများ အကြွေးဆပ်ရန် တစ်ရက်လျှင်ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စား သင့်ကြောင်း ဓနုဖြူမြို့နယ်၌ လယ်သမား များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောခဲ့ကြားသည်။
Author: lubo601 | 8:42 AM | No မှတ်ချက် |
by Seaman Nayminthu on Thursday, January 31, 2013 at 2:16am ·
မိုးကျရွှေကိုယ်များ အုပ်ချုပ်သော ဘီရုမာပြည် တိုင်းဌာနီကြီးတွင် ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာအားလုံးတို့ကား အစဉ်အမြဲ ထူးခြားဆန်းကြယ်လျက် မြင်တွေ့ရတိုင်း ကြားသိရတိုင်း ရင်သပ်ရှုမော အံ့သြဖွယ် မကုန်နိုင်အောင် ရှိနေတော့လေ၏။
မိုးကျရွှေကိုယ်ဟု ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်လိုက်ရသည်မှာ သူတို့သည် ဤဝသုန် ကမ္ဘာမြေထုကို ဘူမိနတ်သန် ပြုကာ မွေးဖွားကြီးပြင်း လာကြသူများမဟုတ်ကြဘဲ အခြားအခြားသော ဘယ်နေရာ ဌာနမှန်းမသိသည့် ပြင်ပ ဂြိုလ်ကမ္ဘာ (အနီးစပ်ဆုံးအားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုလ်သား မားရှန်းများ ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရ၏) အသီးသီးတို့မှ ဟယ်လီဂျက်တပ် ကော်ပလာ ယာဉ်ပျံများ စီးနင်းလိုက်ပါ သွားလာကြရင်း လမ်းခရီးခုလတ် မောင်းဆီအပြတ် ခေတ္တခဏ ဆင်းသက် ရပ်နားခိုက် သာမောဖွယ် ဤဌာနေမှာ လေညှင်းခံရင်း အပန်းဖြေ ခရီးတထောက် နားမည် အကြံပြုလျက် ယာယီ စံအိမ်တော်များ ဆောက်လုပ်ကာ စံမြန်းလာသည်မှာ ရာစုနှစ်တဝက် ကျော်ကျော် (လူ့သက်တမ်းတခုနီးနီး) မျှလောက်တော့ ရှိပေပြီ။
Author: lubo601 | 8:29 AM | No မှတ်ချက် |
အမေ့အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ပေးကြဖို့ တာဝန်ရှိလာပြီ ...
by Shwe Mar Than on Tuesday, January 29, 2013 at 9:03am ·
အမေစု ကိုရီးယားကို ရောက်ပြီဆိုကတည်းက စာထဲကို အာရုံအပြည့်စိုက်မရပဲ စိတ်က ခန ခန နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေ တင်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ FB ဆီရောက်ရောက်သွားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မနိုင်တဲ့အဆုံး လက်ကနှိပ်မိသွားရော။ ဒီနေ့တော့ ဒုတိယမြောက် နေ့ အဆုံးမှာ အမေစု ဖျောင်းချန်းမှာသွားတက် ဖွင့်လှစ်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲသတင်းလေး ကြည့်ချင်နေမိခဲ့တယ်။
Zaw Win shared Lin San Letpanpya's photo.
``ပို့စကတ်ပန်းချီ (၁၉၇၀ နှစ်များ)``
ညသည် နက်လာနေပြီ...ဟု ယူဆရပေသည်။ လမင်းသည် သာနေခဲ့၍ သစ်ခက်သစ်ရွက်များနှင့် စိမ်းသည့် မြက်ခင်းများ၏အပေါ်၊ ....နောက်ပြီး ချိန်းသည့်ညတစ်ခု၏ ချစ်သူနှစ်ဦး၏အပေါ်သို့ ကျရောက်နေခဲ့၏။
by Ye Yint Nge on Wednesday, January 30, 2013 at 3:06pm ·
ဘုရားပုထိုးတွေ-ငွေဒင်္ဂါးတွေနဲ့တိတိကျကျ တင်ပြပြီး ...
Author: lubo601 | 4:43 PM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Journal on Wednesday, January 30, 2013 at 4:36pm
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် ဒေသများတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများ ဦးဆောင်ကာ မကြောက်တရားများ လိုက်လံ ဟောပြောသွားမည်ဟု မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး စင်တာ(MPC) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းကပြောကြားသည်။
မြန်မာဓါတ်ပုံဆရာ (၄) ဦးနဲ့ ထိပ်တန်း ဆု ( ၄) ဆု
Author: lubo601 | 9:34 AM | No မှတ်ချက် |
ဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက် Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ရဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှနုိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရေသည်အသက် ခေါင်းစဉ်နဲ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာဓါတ်ပုံဆရာ (၄)ဦးက ထိပ်တန်း ဆု(၄)ဆုကို သိမ်းကျုံးဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။
" ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းနဲ့ "
Khin Maung Htway shared Nyi Thit's photo.
အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ် ပြောပြမယ်
" ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းနဲ့ " ဆိုတာလေ ဒီလိုဗျ
" ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းနဲ့ " ဆိုတာလေ ဒီလိုဗျ ....
မြန်မာတို့သိသင့်သောစင်္ကာပူပညာရေး ( ဒေါက်တာဘိုင်အို )
မနက်စာက ဘာကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစာဖြစ်နေသလဲ????
Cloud Cuckoo Land shared Royal Hero Media's photo.
နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစမှာ စားရတဲ့ မနက်စာက တစ်နေ့တာလုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအစာ ဖြစ်တာကြောင့် မနက်စာကို မဖြစ်မနေ စားသင့် ကြောင်း မကြာခဏကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ မျက်မှောက် ခေတ်ကြီးမှာ နောက်ကောက်ကျ မကျန်ခဲ့ဖို့အတွက် အများစုက အလုပ်လောဘကြီး နေတတ် ကြပါတယ်။
စာကို ဘာပြုလို့ ဖတ်သလဲ၊
စာကို ဘာပြုလို့ ဖတ်သလဲ၊ အပျင်းပြေဖတ်တာလား၊ ပညာရဖို့လားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ဆိုတယ်...... ကျွန်တော်ကတော့ အပျင်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်းရ၊ ပညာလည်းတိုးစေမယ့် စာအုပ်မျိုးရွေးဖတ်တယ်.....
“မရှောင်ရင်လွတ်တယ်” ဟူသည့်နာမည်ကျော်စကားသည် ကာတွန်းဆွေမင်း(ဓနုဖြူ)၏မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများထဲမှ တိရိစ္ဆာန်လေးများ၏လက်သုံးစကားဖြစ်သည်။ မုဆိုးကျော်တွတ်ပီ၏ အလွဲလွဲအချော်ချော်ပစ်ချက်ကိုရှောင်မှတည့်တည့်တိုးသွားသည့်သတ္တ၀ါ၏အဖြစ်မှာ ငိုအားထက်ရယ်အား ပိုစေ၏။ ဘာကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရယ်ရွှင်ပြုံးစေသည့်ရလာဒ်ကို ပေးသနည်းဟု ဆန်းစစ်သော် situational irony ဟုခေါ်သည့်အဖြစ်ကို verbal irony နှင့်အားဖြည့်ကာတန်ဆာဆင် ပေးလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာပေတွင် ငေါ့ပြောခြင်း၊ ရွဲ့ပြောခြင်းသည်လည်း အလင်္ကကာတန်းဝင် figure of speech တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
Author: lubo601 | 10:10 PM | 1 Comment |
အမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့် ငရုပ်သီးမှုန့်နဲ့ ဓား ဆောင်နေကြတာလဲ
မာံသူ ရိန္ဒ shared Aye Chan Mon's photo. ဓာတ်ပုံ-The Times of India
အောင် ငရုပ်သီးမှုန့်နဲ့ ဓားတွေ ဆောင်ထားဖို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုက ဝေငှပေးဝေနေပါ တယ်။
နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကြောင်းဆိုလျှင် လူတွေက အလွန်စိတ်ဝင်စားကြသည်။ သာမန်မထင်မရှား
လူတစ်ယောက်က အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးကို သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းက
လွဲလို့ ဘယ်သူမှ အရေးတယူမရှိလှ။ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ခေါင်းပေါက်သွားတာလောက်
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်း စုစည်းမှု (၂၉-၁)
လူကြားထဲမှာ စားရင် ခံတွင်းအနံ့ နံစေတာကြောင့် အဆင် မပြေပေမယ့် အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ ဒဿမမြောက် ပြည်ပနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အဖြစ် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တနလာင်္နေ့ကပဲ ဆိုက်ရောက်သွားပါပြီ။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူတွေကို အရေးယူ ရာမှာ အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အမိန့် အမှတ် ၂ / ၈၈ ကို အခု အစိုးရက ပယ်ဖျက်လိုက် သလို၊ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေကိုလည်း ပြင်ဆင် ရေးဆွဲဖို့ သဘောတူ လိုက်ပါတယ်။
လယ်သမားများ အကြွေးဆပ်နိုင်ရန် ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စား...
အမေ့အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ပေးကြဖို့ တာဝန်ရှိလြာ...
အမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့် ငရုပ်သီးမှုန့်နဲ့ ဓား ဆောင်...
တွေးစရာ ( ၁ )
၄၇ - ၇၄ ခုနှစ်များ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ထူးခြားဖြစ...
သစ္စာနီ အနုပညာနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း
အဝေးသင်ဘာသာရပ်များ အားလုံး အွန်လိုင်းမှပင် သင်ကြား...
Asian chick singing irreplaceable using iPhones
ဘာသာစကား စစ်မြေပြင်မှာ နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရသည့် နယ်မြေ...
♥ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ (ဝါ) မိမိကိုယ်ကိုယ် အလင်းဆောင်ြ...
"မြန်မာတွေအားလုံး ဂုဏ်ယူထိုက်သည့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏...
ကမ္ဘာကျော် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လာရန်
ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဆေးကုမ္မဏီကြီးများအကြောင်း တစေ့...
အဆင့်မြင့် နှလုံးသားနဲ့ ကိုယ်ဟာထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ လ...
ကိုရသတို့ ဆိုထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်းလေး
“ဘောလုံး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စံကွန့်”
“ပြဿနာတစ်ခုကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမလဲ”
Singapore Lamest Love Story
Eleven Media CEO သို့ (ပေးစာ)
ပဋိပက္ခဖန်တီးသူတွေ အဆုံးသတ်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့လို
ဘာသာတရား လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ( အပို...
“သဝေထိုး” “င” “၀ဆွဲ”
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၆-၁)
အင်တာနက် ကမ္ဘာဦး၊ ကွန်ယက်စာမျက်နှာများ၏ မူလ နှင့် ...